मलद्वारमा यौनसम्पर्क गर्नाले केकस्ता असर देखा पर्छन् ? - E ALL NEPAL
मलद्वारमा यौनसम्पर्क गर्नाले केकस्ता असर देखा पर्छन् ?
गुदद्वारमा बढी हानिकारक किटाणु हुने भएकाले संक्रमण नसरोस् भनेर कन्डमको नियमित तथा सही प्रयोग गर्नुपर्छ। योनिमा जस्तो प्राकृतिक चिप्लोपन नहुने भएकाले कन्डमलाई बिगार नगर्ने किसिमको चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। गुदद्वारमा प्रवेश गराइएको लिङ्ग कन्डम नफेरी त्यसै योनिमा प्रवेश गराउनु हुँदैन, किनभने योनिमा ती जीवाणुबाट संक्रमण हुनसक्छ। जीवाणुहरूलाई कम गर्न गुदद्वार वरिपरी मात्र सफा गरेर पुग्दैन, भित्रतिर सफा गर्ने डूसकै आवश्यकता पर्छ। त्यसो गर्दा पनि जीवाणुरहित बनाउन भने सकिँदैन। यौन प्रसाधन प्रयोग गरे पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। आफ्ना यौनअंगहरूमा चोट नलागोस् भनेर पर्याप्तमात्रामा चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ, साथै ती प्रसाधनको सतह चिल्लो र सम्म परेको (घोच्ने, काट्ने सम्भावना नभएको) हुनुपर्छ। गुदद्वार, मलाशयमा केही समस्या भएजस्तो लाग्यो, पीडा भैरह्यो वा दिसा गर्दा रगत आयो भने चिकित्सकबाट जँचाउनु बेस हुन्छ।
मन्त्री र मुख्यमन्त्रीकै मन्त्रालयमा आर्थिक घोटाला भएपछी कस्ले गर्ने कार्वाही ?
एक अचम्मैको बिरुवा जस्को प्रयोगले चमत्कारिक फाईदा हुनुका साथै समस्या आउनभन्दा अगाडि नै दिन्छ यस्ताे संकेत देखाउदछ